Umbuzo imikhumbi ...
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #197 by PAYSON
Sure angathanda ukubona elilodwa noma amabili abathwali WWII izindiza.
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #198 by Gh0stRider203
ya bazi ukuthi akusiwona umqondo ndoda embi!
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #202 by PAYSON
Yini singayithandi? Angithi? 1 noma 2 WWII yenethiwekhi mabutho. Ungangisusi okungalungile, Ngiyakuthanda slammin 'phezu onezitezi esinayo manje, kodwa kancane kakhulu ez ne corsair zakamuva (yize hhayi izindiza WWII, kusetshenziswa abathwali efanayo). I zakamuva izindiza yenethiwekhi kuyinto goooody. Yiqiniso, wonke amakati Grumman banendawo ekhethekile enhliziyweni yami. Nginayo i version fsx ngalokho libukeka ukuba bitchin 'WWII flat phezulu, nje abakwazi ukuthola indlela ukuyifaka. It akanawo isifaki efanayo Rikooo has. Got ukusebenzisa, (ngokwezwi nezwi, Ungenaphi ezinye joggin ')
Emuva amafu, PAYSON
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #207 by Gh0stRider203
Angikwazanga uvumelana kakhudlwana. njalo kumnandi ukuzama futhi ugcine izinto eyiqiniso ngangokunokwenzeka
Ngikholelwa ngobuqotho babengeke bamukelwe unakekelwa kanjani ukufaka ukuthi imikhumbi ngaphandle kokuba ifayela phambi Me. Ngiyabona nje ukuthi nokwami ​​ukuthi ubungeke uyifake kufolda indawo, futhi uma kungenjalo afakwa FSX, bese uyifaka ngesandla ...